Akụkọ ndị sí n’Ebe Ọdịda Anyanwụ Ụwa na-egosi na ihe e dere na Baịbụl ka bara uru taa.
Selata Aka n’Ịgụ Ozi Iimel, Ka Nchegbu Gị Belata
Nchọpụta e mere na Vankuva, Kanada gosiri na mmadụ nwere ike ibelata nchegbu ya ma ọ na-ele iimel ya naanị ugboro atọ n’ụbọchị kama ịna-ele ya mgbe niile. Ọ bụ Kostadin Kushlev duziri nchọpụta a. Mgbe ọ na-ekwu banyere ihe ha chọpụtara, ọ sịrị: “Ọ na-esiri ndị mmadụ ike ịhapụ ile iimel ha mgbe niile. Ma, nke bụ́ eziokwu bụ na ịhapụ ịna-ele ya mgbe niile ga-eme ka nchegbu ha belata.”
IHE Ị GA-ECHEBARA ECHICHE: Ebe ọ bụ na anyị bị ‘n’oge dị oké egwu, nke takwara akpụ,’ ó kwesịghị ka anyị chọta otú anyị ga-esi na-ebelata nchegbu?—2 Timoti 3:1.
Azụ̀ Ejupụtakwala n’Osimiri Ndị E Gbukpọrọ Azụ̀ na Ha
Ụlọ ọrụ Wildlife Conservation Society (WCS) kwuru, sị: “E nweela akwụkwọ ndị kwuru na eju mmiri, oporo, na azụ̀ amụbawala n’ebe ndị gọọmentị machiri ịkụ azụ̀” na Beliiz na n’ebe ndị ọzọ dị na Karịbian. Ụlọ ọrụ ahụ kwukwara, sị: “Ọ ga-esi ike ka ebe ndị a ka na-akụ azụ̀ dịghachi otú ha dị na mbụ. Ma n’agbata otu afọ na afọ isii, azụ̀ ga-adịghachịtụwa n’ebe ndị a machiri ịkụ azụ̀. Ma, ọ ga-ewe ọtụtụ afọ tupu azụ̀ ejupụta na ha.” Janet Gibson, bụ́ otu n’ime ndị isi ụlọ ọrụ ahụ, kwuru banyere Beliiz, sị: “Mmachi a a machiri ịkụ azụ̀ ná mmiri ụfọdụ dị n’obodo a ga-enye aka mee ka azụ̀ na ihe ndị ọzọ e gbụkpọrọ jupụtakwa otú ha dị ná mbụ.”
IHE Ị GA-ECHEBARA ECHICHE: Otú ihe ndị e kere eke si ebidoghachị ịmụba n’onwe ha ma e wepụ ihe na-akpa ha aka ọjọọ ọ́ naghị egosi na e nwere Onye Okike maara ihe?—Abụ Ọma 104:24, 25.
Ime Ihe Ike na Brazil
Ụlọ ọrụ mgbasa ozi a na-akpọ Agência Brasil kwuru na ime ihe ike na-arị ibe ya elu na Brazil. N’afọ 2012, ọchụ e gburu ná mba ahụ karịrị puku iri ise na isii. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ahụ́ ike ná mba ahụ sịrị na o nwetụbeghị afọ e gburu ọchụ ha otú ahụ. Otu onye ọrụ nchekwa obodo aha ya bụ Luís Sapori kwuru na ihe mere igbu ọchụ ji rịa elu n’obodo ahụ bụ n’ihi na ọtụtụ ndị anaghịzi akpa àgwà ọma. Ọ bụrụ na ndị mmadụ enweghịzi ihe ha ji iwu obodo kpọrọ, “ihe ha ga-emezi bụ ịna-eme ihe ike iji nweta ihe ha chọrọ.”
IHE Ị GA-EBURU N’OBI? Baịbụl kwuru na o nwere mgbe ịhụnanya ‘ga-ajụ oyi,’ mmebi iwu abaakwa ụba.—Matiu 24:3, 12.
mailto:?body=Akụkọ Gbasara Amerịka na Mba Ndị Gbara Ya Gburugburu%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D102016165%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Akụkọ Gbasara Amerịka na Mba Ndị Gbara Ya Gburugburu